China uNico mveliso kunye nabenzi | Inshare
Igama Product: Nico
Inkcazo: ngokufana vape pen
Battery umthamo: = Yakhelwe-280 mah lithum ibhetri
Amaphimbi: Malunga 300 omfuthelayo (Ngokutsho nokusetyenziswa ngamnye)
indlela Ukutshaja: ngokufana, ziphose emva kokusebenzisa
Vape ubunzima ipeni: 15.4 g
ubungakanani Vape: 94.4 * 15.5 * 6.5 mm
Tank: 1.3 ml ye-CBD & e-juice
ukumelana Ubushushu coil: 1.8Ω
Process Surface: Sticker / oksijini / ipeyinti yokubhaka / ungenziwa ngemfuneko
MOQ: 100 amisiweyo, OEM / ODM umyalelo imfuneko 1000 iiseti
izitifiketi: CE, RoHS
New ngokufana ipeni vape hardware ingenanto ku CBD okanye e-juice
UNico ngokufana Vape Pen Instruction
Inkangeleko: Le uhlobo olutsha lwe tyaba ezilahlwayo usiba vape, izinto ingxubevange aluminiyam, isiphumo sticker umphezulu, izimbo ezahlukileyo izitikha kunye nezimbo ezahlukeneyo.
Khetha phezulu, uyifince, kulula ukuba isebenze.
CBD & E-juice pod: Le kwitanki 1.2ml, malunga 280 omfuthelayo. Kuyinto pod ezilahlwayo ukuba awunakho ukuzitshintsha.
Battery: = Yakhelwe-280mAh ibhetri, esebenzisa ezilahlwayo, akukho mfuneko yokuba ityala, uyilahle emva kokusebenzisa.
UNico ngokufana Vape Pen Specification
Igama Product & Model
Completely ezilahlwayo, ziphose emva kokusebenzisa
Elungiselelweyo ntlobo iziqhamo zizityebi ezipakishwe zinenani ezimibalabala
1.2 ml ye-CBD & e-juice
(Ubude) 94.0 * (Ububanzi) 15.5 * (Ubukhulu) 6.5mm
Eyakhelwe-ngaphakathi Okanye Battery lwangaphandle
Ibhetri Capacity (mah)
280 (= Yakhelwe-capacity ibhetri 280mAH)
izithuthi Air, express, njl
Kutheni Khetha inshare?
R yethu & D Team
1. Yiba R epheleleyo & D iqela: iinjineli MD, iinjineli elektroniki, iinjineli ID, nabayili graphic, uyakwazi ukuhlangabezana OEM / ODM ulwenziwo yabaxumi ezahlukeneyo.
2. Uphando kunye nophuhliso iziphumo: amalungelo awodwa omenzi wechiza ezingaphezu kwe-100 ezinxulumene kwe-e-icuba, kuquka amalungelo abenzi kokusungulwa 10.
3. Siye wazihlanganisa kwaziswa kunye nemibutho yoshishino e-isigarethi kwi basekhaya kunye nabakumazwe ngamazwe, kwaye bayazazi imigangatho kushishino yobugcisa kwiingingqi ezahlukeneyo zehlabathi. Sinako ukuyila iimveliso ukuba abathengi kufuneka ngokutsho ingcamango ecetywayo yi ngumthengi. Ukususela exchange kwengcaciso ngemveliso odlulileyo, ukuba uyilo nophuhliso ngumngundo phakathi, uvavanyo isampuli kamva, kukho iinkcukacha ezaneleyo ukuze ukuvavanya, ukuqinisekisa ukuba uyilo imveliso uyahlangabezana neziphumo zakutshanje yaye ukuphoxa-ngohlangothi emarikeni.
4. Laboratory izixhobo uqwalaselo: ezincamathelayo umatshini xi embi, umatshini phezulu nezisezantsi lobushushu test, ibhetri imitha isiqulatho, umatshini test umsi, Salt umatshini test zokutshiza, ukungcangcazela ngumhloli.
1. Abaphathi kufuneka umlinganiselo kwiminyaka engaphezu kwama-10 yamava.
2. Assembly sayithi: site imveliso 54.000 square ft 2, 10 imigca ibandla.
3. Uthuli-ezamahala kumasifundisane: 11,000 square ft 2, imigca-5 ibandla, singakwazi ukubonelela abasebenzi 100.
Workshop 4. Inaliti: 32.000 square ft 2, 20 oomatshini inaliti ambumbe, CNC / umatshini yintlantsi kunye nezinye izixhobo ngumngundo processing.
5. Izixhobo Advanced Imveliso: kumatshini sticker oluzenzekelayo, ioli ngokuzalisa umatshini, laser umatshini ngentlabo, umatshini yoshicilelo screen.
Control yethu Quality
1. Gqibezela inkqubo yolawulo izitifiketi ISO9001.
2. izixhobo ukuhlolwa Full layini imveliso: ukuxhathisa tester, microphone uvakalelo tester, sokufunxa ukumelana tester, USB yokutshaja uvavanyo. 100% uvavanyo lweemveliso umgca wemveliso ukuqinisekisa izinga lemfundo imveliso ifikelela-99,9%.
3. Ulawulo supply chain Ogqibeleleyo, iyunithi yolawulo IQC ezimeleyo, ukulawula izinto, uze wenze ngokungqongqo uhlolo engenayo ngokwendlela umgangatho AQL1.0 ukuqinisekisa ukuba izinto ezingenayo ukuhlangabezana neemfuno esemgangathweni.
4. Periodic izinto ekrwada RoHS zovavanyo, kwakunye RoHS supply chain siqinisekiso isivumelwano ukuqinisekisa ukuba zonke izinto ezingenayo ukukhawulelana nemigangatho yokusingqongileyo EU.
5. Inkqubo quality Perfect ukuqinisekisa ukungaqheleki umgangatho, ukusuka kumthombo yobonelelo ukuya tracking kamva.
6. E-umdiza iimveliso ukutshaya zigqithile i-EU certification CE / RoHS / TPD, kwaye kwakhona ukuhlangabezana neemfuno abathengi ukwenza isiqinisekiso emfundo kummandla ngamnye.
Banokubulawa CBD Hardware
ngokufana E-Juice Hardware
Vula: 00:00 AM - Close: 24:00 PM
Sisebenza 24/7, sitsalele nangaliphi na ixesha. Ukuba ngaba ukuphendula ngexesha, siya kubiza emva ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
Alibaba Certification Deep
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,AMP mfono
Banokubulawa E umdiza , Original Vape Pen, CBD Hardware , E-umdiza , Banokubulawa CBD Hardware , E-Juice Hardware ,